विरुवा उत्पादन गर्न २६ करोड सहयोग - eagronews.com
By admin ६ असार २०७७, शनिबार ०९:५८
तनहुँ : जिल्लाको ऋषिङ्गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित निर्माणधीन तनहुँ जलविद्युत परियोजनाद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई रु. २६ करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
परियोजनाले सहयोग गरेको सो रकम मध्ये हाल रु. दुई करोड बराबर खर्च भएको छ । उनले भने,“यसबर्ष परियोजनाको नौ लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारको रु. लाख गरी रु. दश लाखको लागतमा विरुवा उत्पादन गरिएको हो ।”
सो कार्यालयले गतवर्ष रु .२० लाख सहयोग गरी जिल्लाको शुक्लागण्डकी कृषि पर्यटन सहकारी संस्थाले तेजपात प्रशोधन गर्ने मेशिन खरिद गरी ल्याएको डिभिजन वन अधिकृत केदार बरालले जानकारी दिए । तेजपातलाई प्रशोधन गरी त्यसबाट तेल निकाल्ने परीक्षण उत्पादन सम्पन्न भएको र अब व्यपारी उत्पादनको लागि तयारी भइरहेको उनले बताए । यसको तेलबाट टुथपेष्ट र मसाज तेललगायतका औषधिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
जिल्लाभित्र रहेका झाडी वनलाई हटाएर उत्पादनशील वन वनाउने उद्देश्यले विरुवा उत्पादन गरेको हो । उनले भने, “पशुपालन तथा मौरी पालन पेशालाई आयआर्जनमा सहज वनाउन र बाँझो जग्गा नराख्ने अभियान अन्र्तगत विरुवा बितरण गर्ने गरिएको हो ।”
आयातित तरकारी भान्सामा – स्वदेशी उत्पादन बारीमै कुहिए